Bill Gates iyo Napoleon Dynamite | Martech Zone
Axad, Juun 23, 2006 Saturday, April 16, 2016 Douglas Karr
Wanaagsan in la arko in Microsoft leedahay dareen kaftan ah!
Tags: albaabbada biilkanapoleon dynamite
Jul 23, 2006 markay tahay 11:33 PM
Ha ha, taasi waxay ahayd fiidiyoow qurux badan! Waxaan maqli jiray in Gates uu sameeyay Napoleon Dynamite spoof, laakiin waligay ma arkin (wali mooyee wali) maanta kahor. Wuxuu qabtay waxyaabo badan oo sidan oo kale ah sanadihii la soo dhaafay, markaa hubaal wuxuu leeyahay dareen kaftan ah!
Jul 25, 2006 markay ahayd 3:12 AM
Halkee lagu duubay taas? Waan ku faraxsanahay inaan arko Bill Gates waxoogaa maad ah oo ku dhex jirta.